जीवनमा खुसीको महत्त्व के छ ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ माघ ११, आईतवार १२:०२ गते
सुखी हुनुको परिभाषा के हो ! हामीमा रहेको कुनचाहिँ चीज सुखी हुन सक्छ ! के मानिसको मन सुखी हुन सक्छ ? किनभने, सबैजना आफ्नो मनलाई खुसी तुल्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । तथापि, कुरा के हो भने मानिसको मनलाई खुसी पार्न सकिँदैन । मानिसका कामनाहरू बदलिरहन्छन् । कहिले के चाहना हुन्छ, कहिले के इच्छा हुन्छ ! मानिस घरमा हुँदा उसलाई अफिस जाने चिन्ता हुन्छ अनि जब ऊ अफिसमा हुन्छ तब उसलाई घर आउने चिन्ता हुन्छ । ऊ आफ्नो मनलाई खुसी तुल्याउने कोशिस गरिरहन्छ ।
एउटा समय यस्तो थियो कुनै भोजनालय होस् या त कुनै सानै रेस्टुरेन्ट होस् । त्यसमा लेखिएको हुन्थ्यो– ‘यहाँ एकदमै घरको जस्तै खाना पाइन्छ । यहाँको दाल आमाले पकाए जस्तै हुन्छ । आमाको हातको दाल पाइन्छ, घरको खाना पाइन्छ ।’ अनि, हिजोआज रेस्टुरेन्टको खाना घरैमा पु¥याइदिने सुविधा छ । यस परिवर्तनका पछाडि कुनै एउटा व्यक्ति नभएर त्यही मनको प्रभाव छ । वास्तवमा मनले त केवल कल्पना गरिरहन्छ । मनले कल्पना ग¥यो, ‘कति राम्रो हुन्थ्यो होला यदि कुनै यस्तो चीज भएको भए– जस्तो टेलिफोन, जसका माध्यमबाट जसले पनि कुराकानी गर्न सकोस् ।’ अनि, जब घरमा टेलिफोन जोडियो त्यसपछि घण्टी बजिरहन्छ तब उसले सोच्न थाल्छ, यदि यो घण्टी बज्न बन्द भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । जे गर्दा पनि यो मनले मानिसलाई दुःख दिन्छ । यद्यपि, मानिसको मूल चाहना त खुसी हुनु नै हो ।
खुसी हुन चाहनु मानिसको प्रकृति हो । ऊ सन्तुष्ट हुन चाहन्छ । ऊ शान्तिमय भएर बस्न चाहन्छ । यो उसभित्रको तिर्खा हो । जबसम्म त्यो तिर्खा मेटिँदैन तबसम्म तिर्खा लागिरहन्छ अनि बढिरहन्छ ।
मानिस आफूलाई खुसी तुल्याउने कार्यमा लागिपरेको छ । कसैलाई केही चीजले खुसी प्राप्त हुन्छ भने कसैलाई अर्कै चीजबाट खुसी प्राप्त हुन्छ । तथापि, उसले आफ्नो खुसीलाई जोगाएर राख्नै सक्दैन । हरेक चीजहरू बदलिरहन्छन् तर ऊ ती चीजहरू परिवर्तन भएको कुरालाई रुचाउँदैन । अब चीजबीजहरू त बदलिरहन्छन् । मानिसले एकदिन यो संसारबाट बिदा लिनुपर्छ भन्ने कुराका बारेमा सोच्दैन । उसले त म सधैँभरि बाँचिरहूँ भन्ने चाहना राख्छ । तर, एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सायद यो कुरा थाहा पाएपछि तपाईँ अचम्मित हुनुहोला । वास्तवमा मानिससँग केवल २५,५५० दिन छ । मानिसको औसत आयु ७० वर्ष हो । अर्थात् २५,५५० दिन ! यसमध्ये कति दिन त बितिसकेको छ । किनभने, २५,५५० बाट एक–एकदिन घटिरहेको छ जुन कहिल्यै फर्केर आउँदैन । हामीसँग जति समय छ, यो समयमा धेरै कुरा प्राप्त गर्ने कोशिस गर्न सक्छौँ । सन्त–महात्माहरूले त पहिल्यै बताउनुभएको छ– ‘यदि तिमी सूर्योदय हुने ठाउँबाट अस्त हुने ठाउँसम्मको राजा भए पनि तिमीले केही लैजाँदैनौँ ।’ मानिस त के कुराको कोशिस गरिरहेको छ भने ‘मसँग एकदमै धेरै पैसा होओस्, मसँग यो होओस्, मसँग त्यो होओस् ।’
यो कुुरा र एउटा उदाहरण उस्तै छ । किसानले उखु रोपे । जब तयार भयो तब उखुको मूल्यमा गिरावट आयो । उनले थोरै मात्र पैसा पाए । उनले सोचे, यदि गहुँ छरेको भए त पक्कै राम्रो हुन्थ्यो होला । बजारबाट राम्रै पैसा हातमा पथ्र्यो होला । त्यसपछि उनले गहुँ छरे तर त्यो समयमा प्याजको मूल्य बढी भइदियो । अब उनलाई प्याज रोपेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । यसरी नै मानिसका सारा कुरा परिवर्तन भइरहन्छन् । तथापि, वास्तविक कुरा के हो ? वास्तविक सुख के हो ! यद्यपि, तपाईंले जीवनमा अन्य चीजहरू पनि हासिल गर्नुपर्छ तर त्यसलाई पनि प्राप्त गर्नुहोस् जसबाट तपाईंको हृदयमा शान्ति मिल्न सकोस् । जसबाट तपाईंको हृदय खुशी होओस् । यो कुरा अत्यन्तै आवश्यक छ ।
तपाईंको जीवनमा आनन्द होला या नहोला तर यसलाई पूरा गर्ने सम्भाव्यता तपाईंभित्रै छ । यसका साथै त्यो पूरा नहुने सम्भावना पनि तपाईंभित्रै छ । यदि तपाईंले आँखा बन्द गर्नुभयो भने सूर्य चम्किइरहेको भए पनि त्यो किरणलाई समेत तपाईंले देख्न सक्नुहुन्न । यदि तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा सुख होओस्, शान्ति होओस् भन्ने चाहना छ भने सृष्टिकर्ताले हरेक मानिसलाई यो सम्भावना दिएका छन् । आफ्नो जीवनमा आनन्द लिनुहोस्, अनि यो जीवनलाई सफल पार्नुहोस् ।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु भइसकेको छ । सन् २०२० साल सहज थिएन तर सहज नहुँदा पनि जसलाई आपूmभित्र वास्तविक सुख र शान्ति छ भन्ने थाहा थियो, उनीहरूका लागि उक्त समयमा पनि आनन्द थियो । चाहे बाहिर जतिसुकै खराब परिस्थिति भइरहेको भए पनि त्यस अवस्थामा समेत त्यस्ता मानिसहरू पनि थिए जसले आफ्नो जीवनमा आनन्द लिइरहेका थिए । किनभने, यो सम्भावना कहिल्यै समाप्त हुँदैन । हिम्मतको कुरा हो । तपाईंभित्र आनन्दको खानी छ । यो खानीको आनन्द उठाउनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई सफल पार्नुहोस् ।
मानिसले जे–जे गरिरहेको छ, त्यो आफ्नो सुख–शान्तिका लागि गरिरहेको छ । उभित्र जुन सुख–शान्तिको चाहना छ, जुन इच्छा छ, त्यो कहाँबाट आयो ? त्यो इच्छालाई कसले उत्पन्न गरायो ? यो कुरा हामीले आफ्नो जिन्दगीमा सिकेका हौँ कि प्राकृतिक रूपमा पहिलेदेखि नै छ । कुनै कुराहरू स्वाभाविक हुन्छन् अनि कुनै कुरालाई सिक्नुपर्छ । कतिपय कुराहरू सिक्नका लागि हामीले विद्यालय, विश्वविद्यालय, ठूला–ठूला शिक्षण संस्थाहरूमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ सिकेपश्चात् हाम्रा इच्छा, कामना, आकाङ्क्षाहरू उत्पन्न हुन्छन् । कैयौँ ठूला–ठूला विज्ञापन अनि पोस्टरहरू देख्छौँ, हामीलाई साथीले केही बताउँछ, हामीलाई मित्रहरुले केही बताउँछन्, अनि हामी सिक्छौँ, हाम्रा इच्छाहरू उत्पन्न हुन्छन् । तर, केही यस्ता इच्छाहरू हुन्छन् जसलाई हामीले सिक्नुपर्दैन, ती स्वाभाविक हुन्छन् । जस्तो कि भोक लाग्नु स्वाभाविक कुरा हो । यसका लागि हामीले कतै गएर सिक्नुपर्दैन । खानाको आवश्यकता परेपछि शरीरले हामीलाई बताउँछ – ‘खाना खाऊ !’ सृष्टिकर्ताले पहिला नै यस्तो प्रबन्ध मिलाएका छन् । किनकि, उनलाई थाहा थियो– हुन सक्छ मानिस मायामा यति फस्न सक्छ त्यतिबेला उसले आफ्नै शरीरलाई समेत ख्याल गर्दैन । त्यसकारण मानिसमा भोक जगाइयो । भोक लागेपछि खाने इच्छा उत्पन्न हुन्छ अनि मानिसले खानाको खोजी गर्दछ । यो प्राकृतिक कुरा हो । यसलाई सिक्नु पर्दैन । तिर्खा लाग्छ अनि मानिसले पानी पिउँछ । के वास्तविक सुख–शान्तिको चाहना नैसर्गिक हो या सिकिएको हो ? यो स्वाभाविक तिर्खा हो । यो भित्रको तिर्खा हो । बाहिरी समस्याको समाधान बाहिर नै प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै गरेर भित्रको चाहना, हृदयको प्यास, वास्तविक सुख–शान्तिलाई पाउने तिर्खाको समाधान पनि तपाईंले आफैँभित्र पाउनुहुनेछ, बाहिर होइन ।